स्वस्थ रहन दैनिक कसरी र कति पानी पिउने? - बडिमालिका खबर
स्वस्थ रहन दैनिक कसरी र कति पानी पिउने?
सामान्यत — पानी तिर्खा लाग्दा मात्र पिउने गरिन्छ। तिर्खा लाग्नु भनेको शरीरले पानीको आवश्यकता भएको संकेत गर्नु हो। तिर्खा लाग्दा मात्र होइन, अरू बेलामा पनि नियमित पानी पिउनुपर्छ। स्वस्थ रहन एक वयस्क मानिसलाई गर्मी मौसममा दैनिक करिब अढाई—तीन लिटर र जाडोमा दुई—अढाई लिटर पानी आवश्यक पर्छ। पानीको अधिक प्रयोगले शरीरलाई हानी गर्छ भने न्यून प्रयोगले पनि हानीनै गर्छ। पानीको उचित प्रयोगले मात्र पनि शरीरमा आउने अधिकांश स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न सकिन्छ।
बिहान उठ्ने वित्तिकै १४ वर्षकी छोरी खुशीले भनिन्– मामु आज बिहान उठेदेखिनै टाउँको भारी भएर दुख्ला जस्तो भएको छ, मैले पानी पिएकै थिएँ तर पनि कमी भयो कि? अहिले गर्मी मौसममा छोरीलाई मात्र होइन अधिकांशलाई टाउँको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, शरीर गल्ने जस्ता समस्या बढेको छ।
पिसाब पहेंलो हुनु, पोल्नु– पिसाब पहेँलो हुुनु पानीको कमी हुनु हो। पानीको कमीले पिसाब कम हुने हुन्छ र पिसाबबाट बाहिर निस्ककासन हुनुपर्ने विकार निस्कासन हुन सक्दैन र पिसाब पोल्ने तथा अन्य समस्या देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा गर्मी गराउँने खानाहरु (धेरै चिल्लो, पिरो, अमिलो, मसलाबर्ग, चिया,कफी आदि) बन्द गरी नियमित पानी पिउनाले शान्त हुन्छ।
बिहान खाली पेटमा बाहेक अन्य बेलामा पानी एकैपटक धेरै पिउनु हुँदैन। अन्य बेलामा एकैपटक धेरै पानी पिउनाले मिर्गौलामा बढी दवाब पर्छ र समस्या हुन्छ। तसर्थ दिउँसो प्रति घण्टा १– १ गिलाँस (२५० देखि ३०० एमएल) का दरले पिउने। दिउँसो घण्टा–घण्टामा पिउँने पानी दिन लामो छोटो हेरेर साँझ ५ या ६ बजेसम्म अर्थात बेलुकी खाना खानु करिब २ घण्टा अघिसम्म पिउने।
पानी कस्तो पिउने ?
गर्मी मौसम छ। गर्मी मौसममा वाहिरी वातावरण नै गर्मी हुन्छ त्यसमा पनि यदि हामीले खाने खाना पनि गर्मी बढाउने खालका (धेरै चिल्लो, पिरो, अमिलो, धेरै मसलाहरु, चिल्लोमा तारेभुटेका खानाहरु, चिया, कफी) आदि जस्ता खानपान बढी भएमा बाहिरी र शरीर भित्रको गर्मी बढेर धेरै समस्या उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ शरीर र मनलाई शितल गराउने खानपान गरौं, पानी नियमित मिलाएर पिउने गरौं। पानीको उचित प्रयोगले मात्र पनि शरीरमा आउने अधिकांश स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न सकिन्छ।